NextMapping | Ndị isi 8 nwere ike ịkwado ndị ọrụ ha iji mee nke ọma na oge enweghị oke
Ndị isi 8 nwere ike ịkwado ndị ọrụ ha iji mee nke ọma na oge enweghị oke
Enwere ụzọ asatọ ndị ndu nwere ike isi kwado ndị ọrụ ha ka ha mee nke ọma n'oge enweghị obi ike.
N’oge na-adịbeghị anya, onye ahịa kesara na ya na-agbasi mbọ ike ka ndị otu ya tinye aka. Ọ kpọkwara na ndị ọrụ ya bụ ndị chere aka ka ha ghara itinye uche ha n'ọrụ na-arụpụta ihe.
Onweghi akwukwo eji egwu ihe banyere ogbaaghara nile, gha aghara aghara na mgbanwe nke oria ojoo juputara.
Agbanyeghị, anyị nwere ike itinye uche na 'ndị mmadụ na mbụ' ma anyị nwere ike ịkwado ndị mmadụ n'oge a siri ike.
Dabere na isoro ndị otu gị na-eme otu nzukọ n'otu oge ma ọ bụ nke ọha na eze n'ọdịda. Site n'inwe ihe kalenda na - aga n'ihu nke nzukọ na ndị otu ọ na - egosipụta nkwụsi ike na ihe ndị otu nwere ike 'ịdabere'.
Na nke otu nzukọ na-elekwasị anya na ọdịmma nke onye otu. Jụọ "Olee otú ị na-eme ma gị onwe gị ma ọkachamara?". Chetara ha akụrụngwa ụlọ ọrụ gị nwere dị ka iwepụ ụbọchị ezumike, irute enyemaka ndị ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ụlọ ọrụ gị nyere maka ọdịmma ndị ọrụ. Site n'ilekwasị anya n'ọdịmma onye ọrụ gị dịka onye ndu na-egosi na ị na-echebara yana na ị bụ akụ a tụkwasịrị obi.
Mee ka njikọ dịkwuo elu ma ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ndị otu ahụ na-arụ ọrụ n'akụkụ. Ọtụtụ ndị ọrụ na-efu efu nke ukwuu ma ọ bụ funahụrụ ha n'ọfịs camaraderie. Ndị otu dị anya na-achọ ndị isi ka ha na-akpọtụrụ ha mgbe niile na anya site na Zoom ma ọ bụ Skype ma ọ bụ sistemụ vidiyo ndị ọzọ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ agala ma ọ bụ na-aga ụdị ọrụ 'ngwakọ'. Ndị ahịa anyị anọwo na-ewu ọrụ dịpụrụ adịpụ na atụmatụ ụlọ ọrụ na usoro nhazi usoro. Ntụziaka Covid bụ iji hụ na ọdịmma ndị mmadụ nke pụtara na ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere 50% nke ndị ọrụ n'ọfịs yana 50% na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ maka ogo.
Na ngbanwe kwupụta ihe ndị ọzọ ime ọrụ dị ka ihe ọhụrụ dị mkpa enwere mkpa maka nkwukọrịta doro anya gbasara atụmanya, ebumnuche, ịkọ akụkọ na nsochi arụmọrụ. Ndi ndu ndi achoputara m ugbu a bu ndi n’etinyeghi uzo doro anya n’ihe gbasara KPI ma obu ihe nlere maka ndi oru di anya. N'oge na-adịbeghị anya, anyị nyeere onye ahịa aka ịzụ ndị otu ya ọnụ na iji ọnụọgụ ọnụọgụ na nsuso n'ọtụtụ dị elu karịa ọrịa na-efe efe.
Oge etinye ego ịnye ọzụzọ, ọzụzụ na mmepe maka ndị ọrụ gị. Gbaa ndị ọrụ ume itinye oge nke ụbọchị iji nyochaa mmụta na iji zụlite nkà n'akụkụ ndị ha nwere mmasị. Wulite atụmatụ mmepe maka ndị ọrụ ọ bụla nke na-enye ha ụzọ mmepe nke nkà iji nyere ha aka ito ma mụta ihe.
Hapụ nkwenkwe ọ bụla ị nwere dị ka onye ndu ma ndị ọrụ gị 'na-arụ ọrụ' n'ezie. N'aka ozo, ndi ndu kwesiri 'itukwasi' ndi otu ha obi. Otu onye ahịa kesara n'oge mụ na onye nkuzi na-akpọ m na ọ kọwara 'nọmba' nke otu ya nke ọma wee gwa ha na ọ bụrụhaala na ha lekwasịrị anya na nsonaazụ, ọ naghị etinye aka na 'otu' ha si nweta nsonaazụ ndị ahụ. Anyị rụkọtara ọrụ na nke a ọnụ maka ọnwa ole na ole ka ọ gbalịsiri ike na 'ịtụkwasị obi' na ọrụ ahụ na-eme n'ezie. N'ihi na o nwere ike soro ọnụọgụgụ ọ nwere ike 'ịtụkwasị obi' na ọnụọgụ ma tụkwasị obi na ndị otu ya.
Mgbe iwe were gị dịka onye ndu ma ọ bụ chee na ị na-adọga, lee anya na nrụgide nke gị. You n’enye onwe gi nsogbu ma obu iwere onwe gi site na iwere onwe gi oge? React na-emeghachi omume n'omume otu na / ma ọ bụ na-ebute gị ngwa ngwa? You na enweta nkwado / nkuzi n’aka onye ndu gi. Tinye uche na ịmụtakwu gbasara ịbụ ezigbo onye ndu? Zọ kachasị mma iji kwadoo otu gị bụ maka ị modelomie nlekọta onwe gị, ime ka ihe mgbakwasị ụkwụ wee dịrị ma bụrụ ihe ị ga-agbachitere n'oge a siri ike.
Wantchọrọ ịnweta akụ ndị ọzọ gbasara otu esi eduga mgbanwe, mepụta ma na-adọta ma jidekwa ndị mmadụ? Lelee usoro mmụta anyị dị n'ịntanetị na obere oge anyị nyere ohere ị nweta ọzụzụ n'efu.